Shariif Xasan Sheekh Aadan oo bilaabay inuu kala dhex-galo xildhibaanada iyo gudoomiyaha baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo bilaabay inuu kala dhex-galo xildhibaanada iyo gudoomiyaha baarlamaanka
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa bilaabay inuu kala fur-furo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi oo mooshinka ka wada gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi C/qaadir Shariif Sheekhunaa.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kulamo albaabada u xiran la qaatay mas’uuliyiinta iyo xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkiisa ayaa ka dalbaday in lasoo afjaro shirarka iyo kacdoonka ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanadaas.
Arrintaan ayaa kusoo beegantay xilli xildhibaano gaaraya ilaa 40 oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku dhawaaqeen inay wadaan mooshin ka dhan ah guddoomiye C/qaadir Shariif oo iyagoo ku eedeeyay xil gudasho la’aan iyo inuu xirtay shaqadii baarlamaanka.
Dhinaca kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo saaxiib dhow la ah guddoomiyaha baarlamaanka C/qaadir Shariif Sheekhunaa ayaa lagu wadaa inuu kala fur-furo kacdoonka xildhibaanada maamulkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, mooshinkaan ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xilli lagu jiro diyaar garowga doorashada 2016-ka oo uu Shariif Sheekh Aadan isku diyaarinayo inuu ka qeyb galo tartanka doorashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya.